परम्परा साथ दिनु मादक पेय को उत्सव भोज पिउने मिलेनियम छ। प्राचीन समयमा धेरै देशहरूमा किनभने उत्तरार्द्ध को unsuitability को पानी सट्टा रक्सी प्रयोग गरेका छन्। र रक्सीमा धेरै लत बसेको अबस्था संग गर्न केही आदर्श तालिका रक्सी मा खुवाउने को अनुकूलन छैन। डाक्टर शरीर लागि रक्सी को एक मध्यम रकम फाइदाको, यो सबै पेय गुणस्तर निर्भर जोड।
के हाम्रो स्टोर र सुपरमार्केट मा बेच छ, अक्सर यो मूल्य टैग र लेबल मा नाम बाहेक, प्राकृतिक पेय संग गर्न बिल्कुल केहि छ। तर तपाईं एक विकल्प किन्न छैन। त्यहाँ बनाउन जटिल केही छ यो "Isabella" बाट रक्सी घर मा।
हामी किन यो छनौट अंगूर किसिम? यो सुदूर उत्तर क्षेत्रहरु को अपवाद संग, हाम्रो देश को लगभग सम्पूर्ण क्षेत्रमा बढ्छ भन्ने तथ्यलाई। विविधता पनि एक सुखद स्वाद छ र तालिका प्रजातिहरू उल्लेख छैन, एकदम unpretentious र हार्डी छ। त्यसैले "Isabella" को एक ग्रेड देखि कि रक्सी - घर-हुर्केका DISTILLERS लागि आदर्श। बारेमा थप विवरण पेय तयारी समयमा बोल्न।
घर मा "Isabella" बाट रक्सी बनाउन, तपाईं वास्तवमा आफ्नै अङ्गुर गर्न आवश्यक छ। तपाईं आफैलाई संकलन गर्न मौका छ भने, एक ड्राई स्पष्ट मौसम मा के, यो पहिलो चिसो लागि प्रतीक्षा गर्न उचित छ। तपाईं आफ्नै दाखबारीको छैन भने, बजार सुकाइएका अङ्गुरहरू मा एक आँखा राख्न र जामुन एक grayish patina प्रस्तुत कि निश्चित गर्नुहोस्। उहाँको बारेमा हामी तल वर्णन। मा घर "Isabella" बाट पट्टिका गुणस्तरीय रक्सी को अभाव मा बस काम गर्ने छैन।
अङ्गुरको हरेक 10 किलोग्राम लागि, तपाईं चीनी को बारेमा तीन किलोग्राम आवश्यक हुनेछ। Bunches आवश्यक जब ड्राई हुनुपर्छ, तर धुने द्वारा कुनै असम्भव अर्थ छ। यो एक कोटिगत निषेध छ। जो जामुन ढाकिएको खरानी पाउडर, एक धेरै वास्तविक रक्सी खमीर छ भन्ने तथ्यलाई। र यो धोएका छ भने, कुनै किण्वन छैन। घर मा "Isabella" को एक रक्सी परिणामस्वरूप खेल्न सुरु गर्दैन।
नधोएका अङ्गुर को जामुन देखि स्वयं हनन गर्न आवश्यक छ। यो अत्यधिक astringency र समाप्त उत्पादन को तीता जोगिन गर्न गरिन्छ। अङ्गुरको एक सानो sprig Nibbled। तपाईं तीतो महसुस? यो सबै त तपाईं यो सल्लाह बेवास्ता गर्नुहुन्छ भने, दाखमद्य मा जानुहोस्। यो कि याद हड्डी मा, tart रक्सी को प्रशंसक लागि पर्याप्त टनीन समावेश गर्छ, र आफ्नो नम्बर अपर्याप्त देखा यदि, तपाईं बस हात मात्र एक जोडी छोड्न सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि, एक तामचीनी बाल्टिन मा ध्यान हात वा काठ tolkushkoy गरेर सबै जामुन मुछ्नु गर्नुपर्छ। तपाईं पक्कै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र चलचित्र "को स्रिउ को Taming" को Celentano नायक द्वारा, तर शहर अपार्टमेन्ट मा त गाह्रो भएको अङ्गुर दबाउन। कुनै एक बेरी जस्ताको तस्तै रह्यो छैन सुनिश्चित गर्न मा, अङ्गुर भद्र अंश लिन आवश्यक छ। हो, यो पेशा पाँच मिनेट छैन, तर कुनै एक तपाईं प्रक्रियाको सजिलो र गति प्रतिज्ञा गर्नुभयो। सबै अङ्गुर चोट गरिनेछ पछि, उसलाई को क्षमता gauze ढाकिएको र न्यानो ठाउँमा एक हप्ताको लागि बाँकी। तर तपाईं हुँदैन, रस ferments छ भनेर सम्झना। पटक को एक जोडी एक दिन अवश्य हात वा एक काठ स्पाटुला संग मिश्रित गर्नुपर्छ छ। सबै केक अप उठ्नेछ पछि, यो cheesecloth मार्फत सकिन गर्न आवश्यक छ। हातमा छोडूँगा छैन र राम्ररी मज्जा (pomace) को प्रत्येक भाग बाहिर मुडना। आखिर, अन्तिम उत्पादन को थिचिएको रकम गुणस्तर निर्भर गर्दछ। को हाय को मज्जा छ, ठूलो गल्ती हुनेछ।
थिचिएको रस, बोतल मा हालिएको छ चीनी थप्न र एक पानी गेट संग stoppered। तपाईं ठूलो विस्थापन को बोतल छैन भने, यो तीन, पाँच वा desyatilitrovymi बैंकहरू प्रयोग गर्न सम्भव छ, तर सट्टा घाँटी मा सेट पानी गेट संग प्लग एक रबर पन्जा। को पन्जा प्वाल पार्ने काम सुई को एक जोडी बनाउन निश्चित हुनुपर्छ।
को "Isabella" बाट घर बनाएको रक्सी तीन हप्ता लक्षविना हिड्नु पर्छ। प्रक्रिया पूरा भन्ने तथ्यलाई, तपाईं पन्जा को पानी छाप वा संकोचन कुनै ग्याँस बुलबुले भन्नेछु। अब तपाईं रक्सी decant गर्नुपर्छ तर यति रूपमा तलछट बाधा छैन। हरेक मोटरहाक्ने व्यक्ति वा aquarist गर्न चिनिने विधि द्वारा एक लचिलो ट्यूब मार्फत यो गर्न सजिलो तरिका हो। यो एक अवशेषहरु र आफ्नो मुख मा अन्य अन्त गर्न बिट को अन्त प्राप्त भनेर होइन र यो तरल delaying एक सानो लिन जार वा बोतल नली खस्छ। त्यसपछि, ट्यूब चाँडै सफा बोतल मा रक्सी घनघोर संग स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। तपाईं पालन गरेका छन् भने एक गिलास कन्टेनर अभाव अस्थायी छ र तपाईं प्लास्टिक बोतल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब दोषी बारेमा एक महिना (कम्तीमा) को लागि परिपक्व गर्न आवश्यक छ। यो सबै अवधि एक गाढा सुन्दर ठाउँमा भण्डारण गर्नुपर्छ र यसलाई साथै, तपाईं यसलाई व्यक्त गर्न पटक अर्को जोडी हुनेछ, मनमोहक छ।
यी अवस्था सबै पछि मात्र, तपाईं अन्तमा एउटा सुन्दर बोतल मा पेय खन्याउन र आफ्नै हातले बनाएको दाखमद्य स्वाद सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
Sauk-Dere - को क्रास्नोडार क्षेत्र को मोती।
ग्यारेज - एक गर्मी छुट्टी को लागि एक पेय
क्यालोरी: मादक पेय - क्यालोरी सामग्री रेकर्ड
नुस्खा मसालेदार तेल - सरल र स्वादिष्ट
Cardiomagnil - नैदानिक व्यवहार मा प्रयोग
कुन फसल पछि तपाईं रोप्न सक्नुहुन्छ, ताकि फसलहरू पाउनेछन्
शरीर निर्माण - महिला वा पुरुष खेल?
कसरी भन्नुभएका नवजात लागि सुट टाई गर्न: मास्टर क्लास
"रम्सटर" ("स्कोडा") - समीक्षा। स्कोडा कमर ("स्कोडा रोम्सटर") - निर्दिष्टीकरण, फोटो, फोटो
गर्भावस्था बेला गर्भाशय को टोन, 1 trimester: लक्षण, उपचार। पहिलो trimester मा गर्भावस्था बेला गर्भाशय को वृद्धि टोन को लक्षण